Fitsapana ny toby fijanonana 5G manaraka ny fifandraisan'ny satelita ny toetr'andro-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2019-07-31 HITS: 13
Vao tsy ela akory izay, ny Birao Toekarena sy Fampahalalam-baovao ao Luzhou dia nanao fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampiasana ny fandrindrana ny làlambe 5G, ary nandrindra ny fametrahana tobin-dasantsy 5G miaraka amin'ireo sampana fifandraisana satelita misy. Hatramin'ny 11 Mey tamin'ity taona ity dia hitan'ny Birao mpamantatra ny toetr'andro any Shengzhou fa tsy nahomby ny fandraisana ireo fitaovana fampitana satelita. Taorian'ny fitsapana sy famotorana miverimberina dia hita fa ny fiatraikan'ny tobin'ny tobim-panadinana 5G vao napetraka akaikin'ny Birao Meteorolojika. Li Xiaoyong, talen'ny Ivon-toerana fampahalalam-baovao ao amin'ny Birao Meteorolojika Ganzhou, dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa roa na telonjato metatra miala ny tobin'ny seraseran'ireo seranam-piaramanidina ireo tambajotram-pifandraisana satelika ireo. Li Xiaoyong dia nampahafantatra fa ny fitaovam-pifandraisana zanabolana an'ny toby fijanonana 5G sy ny sampana mpamantatra ny toetr'andro dia nampiasa tariby matetika momba ny onjampeo elektromagnetika, ka ny fifindran'ny toetr'andro dia niseho fisehoan-javatra nanelingelina. Noho izany antony izany dia nanao fanitsiana ny Birao Meteorolojika Cangzhou taorian'izay, nametraka tambajotra miaro famantarana, ary nifindra tamina tsipika malalaka handraisana ireo angona meteorolojika.
Mitranga ny fanelingelenana ny satelita amin'ny toetr'andro, ny fototra 5G vaovao eo akaiky eo no ahalalana.
Hatramin'ny 11 Mey tamin'ity taona ity, hitan'ny mpiasa ao amin'ny Birao mpamantatra ny toetr'andro Ganzhou fa tsy azo raisina tanteraka ny tahirin-kevitra fandefasana downlink an'ny rafitry ny fifandraisana satelita. "Tamin'izany fotoana izany dia nihena avy hatrany ny kalitaon'ny fifandraisana. Nahazo angon-drakitra dia nilaza izahay fa nantsoina ho any am-baravarana ireo fambara satelita ary tsy afaka niditra tao amin'ilay rojo izahay." Nilaza i Li Xiaoyong fa efa 10 taona mahery no nampiasaina ity fitaovana ity, ary mbola tsy nisy tsy nahomby teo aloha. . Ny mpiasan'ny birao mpamantatra ny toetrandro dia nanao fitiliana sy famotopotorana marobe, saingy tsy hita ny antony. Tamin'ny tapaky ny volana jona dia nanadihady ny biraon'ny radio an'ny biraon'ny toekarena sy fampahalalam-baovao Cangzhou ny Birao Meteorolojika Cangzhou momba an'io trangan-javatra io, ary ny Birao Fampiroboroboana ny toekarena sy ny varotra Cangzhou dia nandamina ny tobim-panaraha-maso ny onjam-peo mba handeha ho any amin'ilay tranokala hanaovana fanodinana sy famahana olana, ka nesorina ireo fitaovana. ary farany mamaritra ny fifandraisan-davitra eo akaiky eo. Ny fanelingelenana famantarana izay ampitain'ny tobin'ny tobin'ny 5G no antony. Li Xiaoyong dia nilaza fa napetraka tao amin'ny departemantan'ny fifandraisan-davitra ireo tobim-pahefana 5G ireo. Tsy azon'izy ireo ny vaovao talohan'izay. "Tamin'izay fotoana izay dia henoko fotsiny fa efa manao fitsapana 5G ireo tanàna lehibe. Tsy fantatro fa manao an'io koa i Ganzhou."
Taty aoriana, ny fandrindrana sy ny serasera dia nanambara fa ny sampan'ny fifandraisan-davitra dia nametraka tobim-panorenana 5G na efatra eo akaikin'ny Birao Meteorolojika, ary ny onjampeo fandraisam-bahiny fifandraisana akaiky indrindra dia ny metatra roa na telonjato monja. Taorian'ny niarahany niasa tamin'ny departemantan'ny fifandraisan-davitra, rehefa novonoina ireo tobim-panadinana, dia nanjavona ny tsy fahombiazan'ny rafitry ny toetr'andro. Manomboka safidy hafa,
Tsy misy fiatraikany amin'ny vinavinan'ny toetrandro Tao anatin'ny iray volana mahery izay nitohizan'ny fifandraisan'ny satelita, namela ny famindrana ny tsipika manokana an'ny broadband ny Birao Météoologique Ganzhou. Li Xiaoyong dia nilaza fa na dia mikorontana aza ny serasera satelita dia tsy voakitika ny kalitaon'ny toetr'andro any Zhangzhou.
Li Xiaoyong dia nampahafantatra fa ny fiantraikan'ny tobin-tsoratry ny 5G ao amin'ny Birao Meteorolojika Ganzhou dia ny fiantraikan'ny fifandraisana. Ny birao mpamantatra ny toetr'andro Ganzhou dia mampiasa rafitra fifandraisana tsy misy tariby, izay ampiasaina indrindra amin'ny fanangonana sy fizarana angona meteorolojika. Satria ny fifandraisan'ny zanabolana dia manana fampitana betsaka sy fampitana angon-drakitra haingana, dia mahazatra ny mampiasa fifandraisana amin'ny radio.
Taorinan'ny fitsabahan'ny radio ny fifandraisana tamin'ny radio dia nanetsika ny drafitra vonjy maika ny birao mpamantatra ny toetr'andro Zhangzhou ary nivadika tamin'ny fambara fampitana broadband. Nilaza tamin'ny mpanao gazety i Li Xiaoyong fa ny Birao mpamantatra ny toetr'andro any Shengzhou dia nividy ny laharan-tariby tamin'ny mpampita serasera, ary ny data sy ny fizarana ny data dia voatana hatrany aorian'ny fanelingelenana ny fifandraisana tsy misy tariby.
Li Xiaoyong dia nilaza fa misy fomba maro hamahana izany. Raha ny marina dia azonao atao ihany koa ny mahita ny manodidina sy ny biraon'ny toetr'andro momba ny toetr'andro mba hanampy anao hikarakara vetivety ny angona. Taorian'ny namaritana ny fitsabahan'ny signal, ny Birao Météoologique Zhangzhou dia nametraka tambajotra miaro koa ho an'ny zanabolana mpandray zanabolana. Hitan'ny fitsapana fa ny tambajotra miaro dia afaka mamaha ny olan'ny fanelingelenana 5G.
Mikasika ny fiantraikan'ny famantarana 5G amin'ny serasera satelita misy ao amin'ny faritra eo an-toerana dia tsy namaly intsony ny Kaomisiona misahana ny toekarena sy ny varotra Cangzhou.
Fa maninona no manelingelina ny serasera satelita amin'ny toetr'andro? Satria akaiky loatra ny tarika onja elektromagnetika
Nilaza tamin'ny mpanao gazety i Li Xiaoyong fa ny antony nampikorontana ny fifandraisana satelita an'ny Birao Météoologique Zhangzhou dia vokatry ny fantsom-pifamoivoizana elektromagnetika akaiky azy roa. Li Xiaoyong dia nilaza fa ankoatry ny fiatraikan'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro, ny tarika hafa mampiasa fifandraisana satelita C-band dia mety hiatrika olana toy izany koa. Raha ny filazany dia nanomboka fitsapana tany amin'ny tanàna maro ny fitsapana ny toby 5G an'i Sichuan, ary niseho ihany koa ny fisehoan'ny fanelingelenana. Na izany aza, nilaza i Li Xiaoyong fa tsy sarotra ny famahana io olana io ary voafetra sy azo fehezina ny fiatraikany. Ohatra, voaporofo fa mahomby ny fametrahana tambajotra miaro.
Ma Yan, mpampianatra ao amin'ny Ivon-toerana Fikarohana Teknolojian'ny Teknolojia ao amin'ny oniversiten'i Post and Telecommunications any Beijing ary talen'ny Ivon-toerana Fampahalalam-baovao dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa "ny tobin'ny tobim-pifandraisana mahazatra dia manomboka amin'ny kilometatra vitsivitsy ka hatramin'ny folo kilometatra, ary tsara kokoa ny misoroka faritra io. " Nilaza i Ma Yan fa ao anatin'ny faritra kely eto an-tanàna dia mila fomba teknika hamahana ny fifandraisana eo amin'ny tobin'ny toby 5G sy ny tobin'ny tobim-pifandraisana nentim-paharazana.
Manam-pahaizana: tsy hisy fiatraikany amin'ny fanaraha-maso ny toetr'andro ny famantarana 5G
Li Xiaoyong dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa ny fifandraisana satelita ao amin'ny Birao Meteorolojika Zhangzhou dia voakasiky ny tobin'ny toby 5G, ary tsy mitovy hevitra amin'ilay famantarana 5G voan'ny tambajotra teo aloha io.
Ny haino aman-jery teo aloha dia nitatitra fa satria ny refin'ny signal 5G dia mitovy amin'ny halavan'ny onja voajanahary amin'ny etona rano dia hisy fiatraikany amin'ny fanaraha-maso ny toetrandro. Araka ny tati-baovao, ny antony mety hanohinanan'ny famantarana 5G ny maha-marina ny vinavinan'ny toetr'andro dia ny fantsom-panafody ampiasain'i Etazonia hampivelatra ny tambajotram-pifandraisana 5G dia mitazona tarika manodidina ny 23.8 GHz (gigahertz), ary ny fambara sy ny etona rano an'ny ity tarika Ny onjam-boasary voajanahary dia manome refy mitovy amin'ny signal. Ma Yan, profesora ao amin'ny Network Technology Research Institute ao amin'ny University of Post and Telecommunications any Beijing, dia nilaza hoe: "Ny toe-javatra tena misy dia tsy lehibe noho ny notaterin'ny media vahiny, satria tsy mitovy ny refy 5G ampiasain'ny firenena tsirairay." Araka ny tatitra momba ny serasera momba ny serasera, ny satelita meteorolojika Fengyun any Shina ankehitriny no ampiasaina. Ny tarika matetika dia 137 GHz sy 1700 GHz. Raha ampitahaina amin'ny 2.6 GHz ka hatramin'ny 4.9 GHz misy famantarana 5G, miharihary ny banga, ary tsy misy fitsabahana eo amin'izy ireo.
Fitsangatsanganana fohy an'ny ekipa mpivarotra Joiwo